Villa Soomaaliya oo ka warbixisay shirka Farmaajo iyo hogaanka Ahlu Sunna
Villa Soomaaliya oo fahfaahisay shirka Farmaajo iyo madaxda Ahlu Sunna
DHUUSAMAREEB, Galmudug - Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dib ugu soo laabtay Caasimadda Muqdisho, kaddib markii uu xalay kusoo xiray magaalada Dhuusamareeb wajiga koowaad ee Shirweynaha Dib-u-heshiisiinta Galmudug.
"DF ka yeeli mayno in Galmudug ay madax uga dhigto Al-Shabaab"
Soomaliya 26.01.2020. 17:36
Ahlu Sunna ayaa sidoo kale sheegtay in xukuumaddu dooneyso in Galmudug ka dhigto "xaafad ka tirsan Muqdisho".
Kulanka Farmaajo la qaadanayo xisbiyada oo weji gabax wajahaya
Soomaliya 23.11.2019. 11:24
Xisbiyo madal siyaasadeed kaga dhawaaqay caasimada Soomaaliya
Soomaliya 01.10.2019. 15:50